Apple Music "nekure" inodarika vanyoreri mamirioni makumi maviri | IPhone nhau
Sezvazvakaita muzvigadzirwa zvakawanda zvakatangwa neavo veCupertino, tinogona kuve nekusahadzika kwekubudirira kweApple Music pakavhurwa sevhisi yemimhanzi, asi nguva yapera nekuvaratidza kuti vakarurama. Haasati ave makore maviri kubvira Tim Cook nekambani yatanga basa ravo uye ikozvino, sekureva kwaEddy Cue, Apple Music yakatopfuura mamirioni makumi maviri evashandisi "nezvakawanda", uye pano zvakakosha kuyeuka kuti inongoverenga vanobhadharira vanyoreri.
Eddy Cue akapa ruzivo rutsva nezuro ku Dzokorora Midhiya Musangano, kwaakataura zvakare kuti Apple Music inoramba ichikura, kuti Tim Cook nekambani vachiri kugutsikana nenhamba yavo uye izvo icharamba ichisunda kuti ikure zvakanyanya. Muchokwadi zvirevo zvakapfuura Jimmy Iovine akataura kuti vari kuyedza "kugadzira chiitiko chetsika dzese", izvo zvinoratidza kuti Apple inoda kuve inongedzo munyika yemimhanzi uye kwete imwe sarudzo.
Apple Music yakapfuura vashandisi mamirioni makumi maviri muna Zvita
Pane ino chiitiko, Cue haana kupa chaiyo nhamba yevanyoreri veApple Music, asi akataura kuti nhamba yakanga yapfuura "vanopfuura mamirioni makumi maviri." Avo vari muCupertino vakazivisa vashandisi makumi maviri emamiriyoni evanoshambadzira mimhanzi sevhisi muna Zvita, saka kuwedzera kungangoita kwevanoverengeka mamirioni evashandisi mumwedzi miviri chinhu chakakosha. Kuti uenzanise, nguva yapfuura Apple yaakapa manhamba chaiwo ekunyorera Apple Music aive muna Gunyana, mwedzi mitatu zvisati zvaitika, uye akataura izvozvo yakanga yasvika vanoshandisa mamirioni 19.
Kune rimwe divi, vachipindura mubvunzo nezvezviri kuitwa neApple kuchengetedza kodzero dzemimhanzi dziripo, Cue akadaro kodzero dzakasarudzika dzakanyanya zano rekusimudzira pane kufamba kwenguva refu kwevaimbi uye izvo zvakasarudzika hazvingambove "zvakanakira kwenguva refu base" muindastiri yemimhanzi. Cue akatsanangurawo kuti chikamu chehurongwa hwaApple hachisi chekuchengetedza izvi zvakasarudzika, asi kushanda nevanyori kubva pakutanga kusvika pakupedzisira, sezvavakaita nevanyori vakaita saDrake.
Pane mibvunzo miviri chete yasara kuti igadzirise: Iri kupi siringi yeApple Music? Zvichazombopfuura Spotify?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple Music "nekure" inodarika mamirioni makumi maviri ekunyoresa
Planet yeApplication ichaburitswa muchirimo uye isu tatova neyepamutemo tirera